नेपाल आज | घुर्ने बानी छ, यसो गर्नुहोस्
घुर्ने बानी छ, यसो गर्नुहोस्
घुर्ने बानीलाई आजकाल स्वास्थ्य समस्याका रुपमै लिइदैंन । घुर्ने मानिसलाई तत्काललाई केही असर नगरेपनि उसंगै सुतेको मानिसको निद्रामा असर पर्छ । घुराईले स्वास्थ्यमा समेत दुष्प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसको सिधा सम्बन्ध मुटुसम्बन्धी समस्याहरुसंग हुन्छ । यसैले घुराईको बढी समस्या छ भने तत्काल डाक्टरको मद्धत लिइहाल्नुपर्छ । यद्यपि घुराईलाई घरेलु उपायको मद्धतले पनि हटाउन सकिन्छ ।
१. बेसारको प्रयोगः बेसारमा एन्टीसेप्टिक र एन्टबायोटिक गुण हुन्छन् । यसैले यसको प्रयोगले नाकको बाटो खुला हुन्छ र श्वास फेर्न पनि सजिलो हुन्छ । राती सुत्नुअघि दिनहुँ बेसार मिसाएको दुध पिउनाले घुराईको समस्या समाधानमा सहयोग मिल्छ ।
२. जैतुनको तेलः यसमा भरपूरमात्रामा एन्टीइन्फ्लामेटरी गुण हुन्छ, जसले श्वासनतन्त्रको प्रक्रिया सुचारु बनाउन सहयोग गर्छ । साथै यसले दुखाईलाई पनि कम गर्छ । सानो चम्चाको आधा चम्चा ओलिभआयलमा समान रुपमा मह मिसाएर सुत्नुअघि नियमित सेवन गर्नुपर्छ । घाँटीमा कम्पन कम गर्न र घुराई रोक्नका लागि नियमित यो उपाय अपनाउनुपर्छ ।
३. अलैचीको सेवनः अलैंचीले चिसोबाट लागेको खोकी निको पार्न सहयोग गर्छ । यसले श्वासनतन्त्र खोल्छ, जसबाट श्वास राम्रोसंग लिन सकिन्छ । राती सुत्नुअघि अलैंचीका केही दानामा मनतातो पानी मिलाएर पिउनाले समस्यामा राहत प्राप्त हुन्छ । सुत्नुअघि कम्तीमा पनि आधा घण्टा अघि यस्तो पानी पिउनुपर्छ ।
४. पुदिनाको तेलः पुदिनामा भएको तत्वले घाँटी र नाकको प्वालको सुन्नाई कम गर्न सघाउछ । यसबाट श्वास लिन सजिलो हुन्छ । सुत्नुअघि पिपरमिन्ट आयलको केही थोपा पानीमा राखेर कुल्ला गर्नुपर्छ । यसले पनि केही दिनमै समस्या समाधान हुन्छ ।
५. लसुनको प्रयोगः लसुनले नाकको मार्गमा सिंगानको निर्माण र श्वास प्रश्वास प्रणालीमा सुन्निने प्रक्रिया कम गर्न मद्दत गर्छ । यदि साइनस अवरोधका कारण घुराई भएको हो भने लसुनले पनि राहतको काम गर्छ । लसुनमा निको पार्ने गुण हुन्छ, जसले ब्लकेजलाई सफा गर्नुका साथै श्वासनतन्त्रलाई पनि राम्रो बनाउछ । राम्रो र आरामदायी निन्द्राका लागि लसुनको प्रयोग फाइदाकारी हुन्छ । एक या दुई पोटी लसुन सुत्नुअघि पानीका साथ खानुहोस, यसले घुराईबाट राहत दिन्छ ।